नवलपुरमा एक युवतीमाथि तेजाब र छुरी प्रहार - Everest Dainik - News from Nepal
नवलपुरमा एक युवतीमाथि तेजाब र छुरी प्रहार
चितवन, असोज ९ । तेजाब आक्रमणमा परी रौतहटकी किशोरी सम्झना दासको मृत्यु भएको खबर सेलाउन नपाउँदै नवलपुरमा एक युवतीमाथि तेजाब र छुरा प्रहार भएको छ ।
कावासोती नगरपालिका वडा नं‍. ९ डण्डा बजारकी २७ वर्षीया बसन्ती परियार भरतपुर अस्पतालमा मृत्युसँग लडिरहेकी छन् । उनको अवस्था गम्भिर रहेको चिकित्सक डा. सुरेश प्रधानले जानकारी दिए ।
तेजाब प्रहारबाट शरीरको करीव २५ प्रतिशत भाग जलेको छ । छुरा प्रहारबाट उनको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको छ । उनको दायाँ गालाको हड्डी फुटेको छ।
देव्रे छातीमा प्रहार भएको चक्कु करङ छेडेर फोक्सोको नजिक पुगेको डा. प्रधानले बताए । अन्य स्थानको घाउ भन्दा यो गम्भिर हेको डा.प्रधानले जानकारी दिए । देव्रे तर्फको पेटमा छुरा प्रहार हुँदा सानो आन्द्रा बाहिर निस्किएको छ ।
बसन्तीमाथि एसिड प्रहार गर्ने विमल शिर्पालीलाई नवलपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनले प्रहरीसामू अपराध स्वीकार गरेका छन् । प्रारम्भिक बयान दिएका विमलले ‘प्रर्वसहमति अनुसार काम नभएकाले’ एसिड प्रहार गरेको बताएका छन् ।
कस्तो छ बसन्तीको अवस्था ?
भरतपुर अस्पतालको आइसीयूको भेन्टिलेटरमा राखेर बसन्तीको उपचार भइरहेको छ । आइतबार ८ बजे आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएकी उनको राति नै अप्रेशन गरिएको छ ।
सर्जन डा। सुरेश प्रधान, डा.प्रितम गुरूङ, डा. ज्ञानेन्द्र न्यौपानेको टोलीले ३ घण्टा लगाएर बसन्तीको अप्रेशन गरेको हो । उनको दाहिने र देब्रे गालाका दुवैतर्फ एसिडका साथै चक्कु प्रहार भएको पाइएको छ । दायाँ गालाको हड्डी फुटेको छ ।
बिमलले बसन्तीको देव्रेतर्फको पेटमा प्रहार गरेको छुराले सानो आन्द्रा बाहिर आएको थियो । त्यसको अप्रेशन गरिएको डा. प्रधानले बताए ।
एसिडले अनुहार, घाँटी, पाखुरा र छातीमा असर गरेको छ । एउटा आँखामा पुरै क्षति भएको जस्तो देखिएको चिकित्सकले बताए । एसिडको असर श्वासप्रश्वासमा पुग्न सक्ने हुँदा समस्या जटिल पनि हुन सक्ने डा। प्रधानले बताए । चिकित्सक डा। प्रधानले भने, ‘अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, अवस्था स्टेबल छ ।’
याे पनि पढ्नुस जीप चोरेको आरोपमा सशस्त्रका हवलदारसहित ३ जना पक्राउ
बसन्तीका श्रीमान यमनारायणले विमलमाथि फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘मलाई पैसा वा क्षतिपूर्ति चाहिएको छैन, जति खर्च लाग्छ म नै व्यहोरौंला तर, उसलाई पनि यस्तै गराउनुपर्छ,’ भरतपुर अस्पतालमा रहेका यमनारायणले भने । अनलाइनखबरबाट